छोरीको कारुणीक वयान! “छोरी भएर पनि बाबुको इच्छा पुरा गर्दिनस भन्दै ! “म माथि चढ्नु भयो’ (भिडियो) – Life Nepali
छोरीको कारुणीक वयान! “छोरी भएर पनि बाबुको इच्छा पुरा गर्दिनस भन्दै ! “म माथि चढ्नु भयो’ (भिडियो)
यस्तो पा’पी बाउ त कसैको पनि नहोस् । मेरो वुवालाई फाँ’सीको स’जाय होस् । म एक दिन वहिनीहरुसंगै सु’तेकी थिए । मलाई आफु सुतेको वि’स्तरामा बो’लाउनु भयो । म जान मा’निन । बुवाले ज’वर’ज’स्ती ता’नेर आफ्नो वि’स्तरामा लै’जानु भयो अनि म माथि आ’उनु भयो आफ्नै बुवावाट वर्षौं देखि क’रणीको शि’कार भ’एकी छो’रीको का’रुणीक वयान हो । त्यो दिन आमा घरमा नभएको दिन थियो । वुवाले त मलाई धेरै लामो समय देखि य’स्तो काम गर्दै आ’उनु भएको छ । म कति चि’च्याएँ कति रो’एँ” तर मेरो पी’डा बु’वाले सु’न्दै सुनेनन् ।
मैले त्यसो भन्दा तँ छोरी भएको के काम भयो, मेरो यति सानो इ’च्छा पनि पुरा गर्दिनस्, भनेर ध’म्की दिए । मैले भनेको मा,निनस् भने ब’हिनीहरुले दु’ख पा’उँछन्, सबैको भविष्य वि’ग्रन्छ, भनेर भन्नुहुन्थ्यो । मैले पटक पटक आमालाई भन्ने को,शिष गरेकी थिएँ, तर भन्न सकिन । तर कान्छी बहिनीले था,हा पाए,की र,हिछन् । बहिनीलाई थाहा छ, भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थिएन । लामा समय देखि मैले यो पी,डित, सहेर, बसेकी थिए । उनको बो,ली रो,कियो, यति भ,न्दै ग,र्दा उनी भ,क्कानिइन् । मैले आफ्नो पी’डा बा’हिर ल्या’उँदा मेरै अंकल अन्टीले पनि गा’ली गर्नुभएको छ ।
“तँ दुनियासंग’ वि’ग्रिइस अहिले आफ्नो बा’उलाई फ’साइस् भने’र म’लाई नै गा’ली” गरेका छन् । उनले रुँ’दै भनिन् । गाउँ समाजले” आफ्नो कुरा “विश्वास नगरेका का’रण” अहिले घरमा बस्न पनि आफुलाई ड’र भएको बताएकी छन् । पटक पटक बुवाले त्यस्तो काम गरेपछि औ’षधी खान’ दिने गरेका थिए । त्यो औ’षधी ग’र्भ नि’रोधक औ’षधी थियो । त्यसको डो’ज धेरै भएका का’रण अहिले ति युव’तीको स्वा’स्थ्य अवस्था पनि वि’ग्रिएको छ । घरमा मात्र होइन वहा’ना गरेर” घर वाहिर बो’लाएर वुवाले हो’टलमा को’ठा लिएर’ पनि आफु’ माथि ुत्यस्तो न’राम्रो काम गरेको छोरीले बताएकी’ छन् ।
उनले आफु जस्तै’ पी’डा परेका’ अरु कि’शोरीलाई पनि उन’ले आ’ग्रह गरेकी’ छन् । सम’स्या नलु’काउ खु’लेर ‘भन, त्यस्तो कु’कर्म गर्ने’लाई स’जाय दिने काममा अ’गाडी बढ्न, अरुलाई, पनि सु,झाव, दिएकी छन् । एक दिन छोरीको, स्कूलमा, काम छ, छोरीलाई, पठाइदे, त भनेर श्रीमा,नले ,भनेपछि, आफुले छोरीलाई बाहिर प,ठाएको कुरा, आमा,ले यस, अघि खोलेकी थिइन् । त्यसरी आफु विद्यालयमा जान, भनेर जाँदा, विद्यालयमा काम थिएन, छोरीले ,यस अघिको भिडियोमा भनेकी छन्, “वुवाको अकेै “नियत रहेछ” मलाई लिएर होटलमा लै’जानु भयो” अनि कोठामा त्यस्तै” नराम्रो काम गर्नुभयो । हेर्नुहोस भिडियो कुराकानी ”
मैले छोरीलाई क*रणी गरे मेरो ग*ल्ति भयो, मलाई जे’लबाट छुटाउ भन्दै का*रागार बाटै श्रीमतीलाई फोन गरे पापी श्रीमानले’ ”’ आफ्नै १७ वर्षकी छोरीलाई बा’रम्बार यौ*’न शो*’षण गर्ने बुवाले प्रहरी हि*रासतवाट आफ्नो श्री*मतीलाई फोन गरेका छन् । उनले आफुले गल्ती स्वी*कार गर्दै एक पटक मा*फि दिन आ*ग्रह सहित बा*रम्बार श्री*मतीलाई फोन गर्ने गरेका छन् । आफ्नै छोरीलाई क*रणी गर्ने श्रीमानलाई प्रहरी हिरासतमा पठाएकी श्रीमती अहिले छोरीको न्यायका लागि मिडिया गुहार्दै हिडेकी छन् । आफुले गरेको कर्तुतका कार*ण प्रहरी हिरा*सतमा पुगे प*छि ति पुरुषले श्रीमतीलाई फोन गरेर फ*काइरहेका छन् ।
प्रहरी हि*रासतमा बसेका मेरा श्रीमानलाई कसले फोन दिन्छ, मलाई बारम्बार फोन गरेर मलाई भेट्न आइज भनिरहेका छन्, उ’नले रुँ’दै भनिन्, गल्ती स्वी’कार गरेपछि मात्र म भे’ट्न जान्छु । उनले श्रीमानले पटक पटक फोन’ गरेर आ’फुलाई भेट्नबो’लाएका का’रण ”अब के गर्ने भन्ने निर्णय” गर्न नसकेको बताएकी” छन् । आफुलाई’ बिवाह गरेर ल्याएपछि” पनि बार’म्बार सौ’ता ल्याइरहँदा’ पनि सहेर ‘बसेको बताएकी” उनले छोरी माथि’ गरेको अ’त्याचार सामु भने नझुक्ने बताएकी छन् । उनले आफ्ना श्रीमान” स्थानिय नेता पनि भएको बताएकी छन् ।
मिडिया’कर्मी’संग अ’न्तरवार्ता दिँ’दै गर्दा पनि उनलाई श्रीमानको फो’न आएको थियो । उनले फोनमा तिमीले गरेको त्यो ग’लत काम स्वी’कार गर्ने की नगर्ने भनेर सो’धिरहेकी थिइन् । ति’मीले स्वी’कार गरेपछि’ मात्र म तिमीलाई भेट्न’ आउँछु भन्दै थिइन् फोनमा । उनले फोनमा म पापी हुँ, मलाई कारागारमा कुहिने अवस्था’मा नराख, अरु छोराछोरीसंग भेट्ने वातावरण बनाइ’देउ भन्दै’ फ’काएको उनले बताइन् । मै’ले ग’ल्ती गरेको छैन भ’न्दिन तर म’लाई एक पटक माफी देउ भन्दै श्रीमतीलाई फ’काएका’ छन् ।हेर्नुहोस’ भिडियो कुराकानी ”
एक्लै दुख गरेर पाँ’चवटा छोराछोरी हु’र्काएकी ति आमालाई’ आफ्नै” श्रीमानले ‘छोरी माथि यस्तो” दृष्टि लगाउलान् ”भन्ने कल्पना पनि ”गरेकी थिइनन् । आफुलाई ”माया त कहिल्यै” गरेनन् बारम्बार सौ’ता ल्याइरहन्थे यिनी छोराछोरीको अनु’हार हेरेर ब’स्दै आए’की आ’मा मा’थि अहिले सहनै’ नसक्ने पी’डा थपिएको’ छ । उनले त्यसरी’ आफ्नै’ छोरी माथि कुदृष्टि” लगाउ’ने श्रीमानलाई’ ज’न्म कै’दको’ माग राखेकी छन् ।
Previous पैसा चो’रेर र’क्सि खाएको रि’समा बुवाले आमाको ज्या’न लिएपछि, तीन छोरीको बिच’ल्ली भिडियो
Next हिमेश पन्त कमेडी च्याम्पियनको विजेता बनेपछि, खबपूको समर्थकको सुरु भयो वि’रोध (भिडियो)